Qiso Run Ahaan Dhacday: Sheeko iga Oohisay baa Hooyadeey ii sheegtay! | KEYDMEDIA ONLINE
By Guuleed Xaaji Jaamac - Hooyadaey waxay idin ka Codsanaysaa in Maqaalkaan la soo galiyo Webkiina Keydmedia Online si Mujrimkaas usan Umada mar dambe dhibaato ugu geeysan oo la ogaado in uu gacan ku dhiigle yahay, waxaan ilaah ka rajeynayaa in uu Tuke Canbaar leh noqdo. Qiso Run ahaa dhacday
Marka ugu horeyso waan idiin salaamay Bahda Keydmedia Online oo aan Qoraaladooda aad u jeclahay, tan kale waxaa Salaamayaa dhamaan Aqrisataayasha Aqrisaneysa Qoraalkaan.
Magacaygu waa Guuleed Xaaji Jaamac kuna dhashay kuna Barbaaray Wadankav Sweden.
Waxaan rabaa in aan idiin sheego Qiso ay Hooyaday ii sheegtay Waayahii ay ku nooleed Burco. Hooyaday waxay u Shqeen jirtay Wasaarada Waxbarashada oo ay Macalimad ka aheyd Dugsiga sare ee Burco.
Waxay ku dhalatay Magaalada Burco oo Waxbarashadeeda ku dhameesatay, ka dib waxay ka soo abaxday Jaamacada Lafoole.
Waxay ii sheegtay Qiso yaab leh oo aan la ooyay, taaas oo ah:
Waxaa Hooyadey lagu xiray Magaalada Burco Sanadkii 1982 iyadoo lagu eedeynayo in ay la shaqeynaysay Jabhadii SNM, ilaa iyo waxay xirneed SNMtii ay ka soo gasho Burco.
Xabsigii dhibaato badan ayaa lagu soo gaarsiiyay oo ilaa hada ay ka kaban la'dahay.
Wayna ii diiday in ay ii sheegto ama aan ka hadalno, laakiisnse Qisadii ugu xumeed ay ii sheegtay waxay ahayd oo ay tiri: Maalin Maal mah ka mid ah anakoo banaanka Xabsiga fadhino ayaa waxaa la keenay Dad aan ku qiyaasi karo ilaa iyo 300 Qof, meel horteen ah baa la fadhiisiyay, dabadeedna gaari Laadkuruusar ah waxaa ka soo degay Taliyahii Nabadsugida Togdheer Cabdiqani Xaji Baale oo muraayado madow sito.
Wuxuu ku amray Nin la socday in uu Magacyadooda Qoro iyo Jufo hoosaadka ay ka yihiin Qabiilka Isaaq.
Dadka badan oo aan meesha ka aqooday waxaa ku jiray Saddex Adeeradey dhaleen, Dumaashigay iyo Dhaliyaro Dugsiga sare aan Macalin ugu aahaa.
Waxaa ka muuqda Murugo , Diif iyo Jir dil xun oo loo geestay. Indhaha way igu qaban waayeen xishood aawdeed waayo kuligood way Qaawanaayeen.
Habeen walba saq dhexe ayaa la kaxeen jiray oo la soo Jir Dili jiray, markaan maqlo gawaarid guuxooda ayaan meel yar oo duleel ah ka daawan jiray.
Hurdada igama soo dhici jirin fool xumada lagu soo suubiyey aawgeed. Habeen Habeenada ka mid ah waxaan arka Seedigey oo dibada laga keenay oo gacmaha xariga uga xiran oo Qaawan oo dhiig wada qariyay wajigiisa taasi waa urkutaala aan waligeey iloowee.
Muddo Labo Asbuuc ka dib waan waayay Dadkii oo dib looguma soo celin Xabsigi. Nin aan isnaqaano oo shaqaalaha Xabsiga ah ayaa si hoose iigu sheegay in Dadkii la laayay oo Meedkoodii ay yaalaan toga Burco hal Asbuuc ka badan oo la diiday in la Aaso si Reer Burco ay SNMta u taageerin, wuxuu ii sheegay in Taliyihii Nabadsugida uu Meedkii ka dul Qudbadeeyey.
Waa Taariikh aan waligii laga iloobeen Magaalada Burco. Kadib Cadbiqani Xaji Baale oo ah Ninkii intaas Dadkaas masaakiinta ah u geestay waxaa la ii sheegay in uu ka qeyb galay Dagaaladii Sokeeye ee Magaalada Kismaayo oo dhawaac halis ah ku gaaray oo Lug ay ka go'day , dabadeedna uu Norway uu galay Qaxootinimo Magacana uu iska bedelay mudana uu ku dhuumaalaysanayay.
Imika waxaan maqlay in uu ku jiro Ergada Odayaal dhaqameedka Reer Puntland in uu ku jiro.
Waligay ma ilaawaayi oo waan la socon meel walbo uu ku dhuunto. Ilaah waxaan ka rajeynayaa Maalin in aan Isaga iyo Aniga iskakaayo hor fadhiidano oo Maxkamad Caadil ah aan hor fadhiisano si aan ugu cadeeyo falalkii foosha xumaa uu u geystay Reer Burco Dil, Jir dil, Kufsi , handadaad.
Guuleed Xaaji Jaamac iyo Hooyadiis - Guuleed1@hotmail.com